Ungazitsiba njani iiNtengiso ezinkulu kakhulu kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 315
Namhlanje sikuzisa iqhinga elimangalisayo Uya kuthi ngayo ukwazi ukutsiba iintengiso ngaphakathi kweqonga leYouTube. Enye yeendlela ezilula zokwenza oku ngokurhoxisa ubhaliso lwePremiyamu yeYouTube, kodwa kukho enye indlela yasimahla yokukufeza.
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba enye yezona zinto zicaphukisayo ezinokwenzeka xa sidlala nayiphi na ividiyo ye-YouTube kukuba enye yeentengiso ezininzi ezisungulwe liqonga ziyavela. Ngethamsanqa kukho indlela yokubaphepha kwaye namhlanje sifuna ukukubonisa.
Thintela iintengiso ezinde zikaYouTube
Ngaba ufuna isicelo siyeke ukukubonisa iintengiso ngalo lonke ixesha? Isisombululo esiqinisekileyo koku yayikukubhalisela iNkulumbuso yeNkulumbuso, ingxelo ehlawulelweyo yeqonga levidiyo elidumileyo. Kodwa kukho enye indlela yokuphepha ngokupheleleyo ukubona iintengiso ezinde ezivela kwividiyo ye-YouTube.
Into yokuqala yokucacisa kukuba I-YouTube ineendlela ezininzi zokuthengisa intengiso, Kodwa enye yezona zinto zisebenzayo neziphindaphindayo kukusebenzisa iintengiso ngaphambi nasemva kweevidiyo.
Nangona olu hlobo lwezicwangciso zentengiso lusebenza kwiYouTube, inyani yile kubasebenzisi ayibonisi into emnandi. Ukubukela ividiyo kunye nentengiso emangazayo ibonakala iyacaphukisa nabani na. Okwanamhlanje kubalulekile ukuba ufunde ukuba ungatsiba njani iintengiso ezinde kakhulu kwiYouTube.
Iintengiso ezimfutshane vs Intengiso ezide
Zimbini iintlobo zentengiso kwiYouTube. Kwelinye icala sifumana ezo ntengiso zimfutshane, ezihlala imizuzwana embalwa kwaye zihlala zingangeni. Nangona kunjalo, izibhengezo-ntengiso ezinde apho umzuzwana ubonakala ujika kwiiyure zihlala zivela.
Iintengiso ezibonakala ngaphambi nasemva kweevidiyo kwiYouTube akufuneki zenze iintengiso ezimfutshane. Kukho ezinye ezinokuhlala imizuzu eliqela, kwaye kwezo meko kubalulekile ukuba ufunde indlela yokutsiba ukuze ungachithi ixesha elininzi eqongeni.
Akunyanzelekanga ukubona intengiso epheleleyo. Kukho indlela elula yokujikeleza intengiso emva kwemizuzwana embalwa. Eli qhinga lisebenza kuphela kwezo meko apho ixesha elipheleleyo lentengiso lingaphezulu kwemizuzwana engama-30, kungenjalo kuya kufuneka sijonge ngokupheleleyo intengiso.
Inkohliso yokutsiba iintengiso ezinde kwiYouTube
Ngoku, siza kuhamba nenkohliso ekudala ilindelwe eya kukunceda utsibe ezo ntengiso zinde kakhulu edla ngokuvela ngaphakathi kweqonga leYouTube. Inyani yile, ukutsiba intengiso ende ayisiyonto inzima kwaphela.
Ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kolu hlobo lwecala kukucofa kwiqhosha "Tsiba iintengiso”Oko kubonakala kwicala lasekunene lefayile yokudlala emva nje kokuba imizuzwana emihlanu yokuqala yentengiso idlulile.
Kukho enye indlela yokutsiba iintengiso ezinde kwiYouTube. Ungazama ukuvala ividiyo oyidlalayo kwaye uyivule amatyeli amabini. Kwityeli lesithathu ividiyo ayisayi kuqala ngale ntengiso.
1 Thintela iintengiso ezinde zikaYouTube
2 Iintengiso ezimfutshane vs Intengiso ezide
3 Inkohliso yokutsiba iintengiso ezinde kwiYouTube